Kugadzira maforamu evatengi. Vhura zvishandiso zvevanamuzvinabhizimusi. | Linux Vakapindwa muropa
Kugadzira maforamu evatengi. Vhura zvishandiso zvevanamuzvinabhizimusi.
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, Linux software
Sezvo Internet inoshanduka uye tekinoroji ichifambira mberi, sarudzo nyowani dziri kutsiva idzo dzaimbove dzakakurumbira. Izvi hazvireve kuti maturusi aya anofanirwa kusiiwa sezvo achigona kubatsira.
Iyi ndiyo kesi yemaforamu angave ari akanakisa sarudzo yekuvaka hukama hwevatengi.
Mumazuva apfuura pasocial media, maforamu ndiyo yaive nzira yekutanga yevashandisi vazhinji kuchinjanisa mameseji online. Muchokwadi, midzi yavo inotangira paInternet sezvo vari ivo vakananga vana ve "bulletin board" kune vashandisi vakabatana kubva kune yavo acoustic modems kuchinjana ruzivo. Yekutanga chirongwa chakadai chakatangira kubva pakati-ma70
Nhasi maforamu mawebhusaiti anotendera vanhu kuchinjana mazano pamisoro yezvavanofarira. Kunyangwe maforamu mazhinji achikubvumidza iwe kuti utarise zvemukati pasina kunyoresa, ivo vanowanzoda kunyoreswa kuitira kuti vatore chinhanho. Pakutanga, kunyoreswa uku kwaiitwa uchishandisa email account, asi ikozvino vazhinji vanokutendera kuti ushandise account yako pasocial network.
Vashandisi vanozivikanwa neavatar uye zita rekunyepedzera.
1 Kushanda uye kubatsira kwemaforamu
2 Kugadzira maforamu evatengi vachishandisa maturusi akavhurika
Kushanda uye kubatsira kwemaforamu
Kushanda kwemaforamu kwakadai. Mushandisi anotumira meseji ine mibvunzo, maonero, mifananidzo, odhiyo, vhidhiyo kana zvinongedzo kune zvemukati zvirimo. Vamwe vashandisi vanogona kuwana iwo meseji chero nguva uye kupindura (zvese kumeseji yekutanga uye kune chero mhinduro.
Iyo seti yemessage nemhinduro zvinoumba tambo. Threads dzinogona kuiswa muzvikamu uye zvinoenderana nesaizi uye chinangwa chesaiti misoro yacho yakakamurwa kuva epasi-maforamu.
Kune hunhu hwatataura, maforamu inzira huru yekuvaka hukama nevatengi nevashandi.
Nzira dzechinyakare senge foni neemail zvinongobvumidza kutaurirana kwega Izvi zvinotungamira mukuparadza kwakakura kwenguva uchipindura mibvunzo imwechete nguva nenguva. Panyaya yemasocial network, ndeavo vanogadza chimiro chemukati mharidzo uye marongero ehurukuro.
Foramu hazviite chete kuti mhinduro kumimwe mibvunzo yevashandisi iwanikwe kune vamwe. Zvinoita zvakare kuti zvive nyore kwavari kuti vashande pamwe nekutsvaga mhinduro. Zvakare zvakareruka kuwana ruzivo runodiwa sezvo mamaneja ezvemukati aine maturusi ekutsvaga ane simba.
Kujekeswa. Kunyangwe mwedzi mishoma yapfuura ndakataura maturusi matatu ekugadzira maforamu muAddict Linux, iwo andichataura nezvazvo iye zvino akakodzera kushandiswa kwekambani sezvo vaine mashandisiro akanaka ezve zviwanikwa uye vanogona kugovana sevha uye nekudyidzana nekambani uye e -kutengesa masosi.
Kugadzira maforamu evatengi vachishandisa maturusi akavhurika
Mune ino kesi tine iyo yakasarudzika modhi yekushandisa iyo inobhadharwa kana iwe uchida rutsigiro rwekutengesa uye kuitisa kana yemahara kana iwe ukagadzirisa kutsigirwa kwenharaunda uye kushandisa yako wega server.
Inotarisana nemabhizimusi madiki ayo anoda kukura, akagadziriswa enjini dzekutsvaga, saiti dziripo uye kushambadzira kushambadzira. Izvo zvakare zvakanyanya kugadzirisa.
Pamwe ndizvo Inonyanya kufarirwa yemukati mamaneja ekugadzirwa kwemaforamu. Iyo yakanakira maneja madiki evashandisi pamwe nemaforamu akaomarara ane akawanda masamu-maforamu nemisoro. Nenzira imwecheteyo seVanilla, inogona zvakare kusanganiswa nenzvimbo dziripo, kunyangwe mune ino kesi iri 100% nharaunda yekushandisa.
phpBB inogona kutarisirwa kubva kune yayo manejimendi pani uye inonyanya kugadziridzwa nekutenda kumatemplate uye ekuwedzeredza akagadzirwa nharaunda.
Ndiwo mutsara we Nyore Machine Machine. Iyo inonyanya kugadziriswa yemukati maneja yemaforamu asi ine mashandisiro anoshandiswa eserura zviwanikwa.
Yepamberi template system yekugadzirisa maforamu.
Inotsigira mitauro yakati wandei panguva imwe chete.
Tevera tambo dzisina kuverengerwa kwenguva.
Yakagadzirirwa enjini dzekutsvaga.
Pasuru maneja kufambisa kumisikidza uye kusabvisa kwewedzero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kugadzira maforamu evatengi. Vhura zvishandiso zvevanamuzvinabhizimusi.
NVMe pamusoro peTCP: ichangoburwa craze kubva kuna Oracle mainjiniya
Edge uye Visual Studio Code. Kubatanidzwa kukuru kwevagadziri vewebhu